मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष निर्धारित मितिभन्दा १ साता पछि हुने - नेपाली खोज
मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष निर्धारित मितिभन्दा १ साता पछि हुने
नेवार सुन्दरीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष निर्धारित मितिभन्दा १ साता पछि हुने भएको छ। नेवार समुदायका युवतीहरुका लागि नेप्लिज फेशन होमले आयोजना गर्दै आएको मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष फागनु ७ गते कमलादिस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्ने पक्का गरे पनि सरकारले प्रजातन्त्र दिवससम्बन्धि कार्यक्रम प्रतिष्ठानमै गर्ने भएपछि एक साता पछाडिलाई सार्नु परेको नेप्लीज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्धरले जानकारी गराइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागीतामा प्रजातन्त्र दिवससम्बन्धी कार्यक्रम तोकिएकाले मिस नेवाः को कार्यक्रम एक सातापछाडिलाई सारिएको हेमाले बताइन्। अब १५औं संस्करणको मिस नेवाः नेपाल ११४१ फागुन ७ को साटो फागुन १५ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुनेछ।
मिस नेवाःका प्रतिस्पर्धीहरु मिस ट्यालेन्टलगायतका कार्यक्रम तथा विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण र भ्रमणपछि अहिले अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भिड्ने तयारीमा जुटेका छन्। १५औं संस्करणको मिस नेवाः नेपाल ११४१ मा १५ जना नेवार सुन्दरीहरु अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भिड्दैछन्।
नेप्लीज फेसन होमले डेढ दशकदेखि नेवार समुदायका युवतीहरुका लागि मिस नेवाः नेपाल आयोजना गर्दै आएको छ भने नेवार समुदायका बालिकाहरुका लागि लिटिल मिस नेवाः आयोजना गर्दै आएको छ । नेवार समुदायको कला, भाषा र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न यी प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको नेप्लीज फेसन होमकी अध्यक्ष मानन्धरले बताउँछिन्।
ओलीको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई यति धेरै प्रश्न, कि तँ छैन कि म छैन ? अब के हुन्छ नेकपामा ?
पशुपतिका संरचना विकास गरिने, थपियो वातावरणमैत्री शवदाह गृह
बुबाले गरे दुई वर्षीय छोरी सृष्टि घिमिरेको डो’रीले घाँ’टी थि’चेर ह’त्या